Medjugorje: ozi nke nne anyi di aso, abali iri-abuo n’onwa Juun 12. Meri na agwa gi okwu gbasara okpukpere chi na oku ala mmuo
di Paolo Tescione - June 12, 2020
Arewa ka e kewasịrị n’elu ụwa, ma unu nile bụ ụmụ m. Ndị Alakụba, ndị Ọtọdọks, ndị Katọlik, unu niile ha nhata n’ihu mụ na nwa m nwoke. Unu niile bụ ụmụ m! Nke a apụtaghị na okpukpere chi niile ha nhata n'ihu Chineke, mana ụmụ nwoke nwere. O zughi oke, isonye na nzuko nke Katolik ka azoputa: odi nkpa ịkwanyere uche Chineke obuna ndi n’abughi ndi Katoliki bu ihe ekere eke n’oyiyi Chineke ma choputa inweta nzoputa otu ubochi ma ha adi ndu site n’iso olu nke ako na uche ya. A na-enye mmadụ niile nzọpụta. Ọ bụ naanị ndị kpachapụrụ anya jụ inue Chineke ka amamikpe: ọ bụ onye nyere obere ihe, a ga-ajụ obere ihe. Onye ọ bula enyere ihe kari, ka agāju ihe uku. Naanị Chukwu, n'ikpe ikpe adịghị agwụ agwụ ya, guzobere ogo ọrụ dịịrị onye ọ bụla ma mee mkpebi ikpe ikpe azụ.